सात सालयता कुन जातिबाट कति भए प्रधानमन्त्री ? (मोहनशमशेर राणादेखि केपी ओलीसम्म) - News Today
सात सालयता कुन जातिबाट कति भए प्रधानमन्त्री ? (मोहनशमशेर राणादेखि केपी ओलीसम्म)
भारतीय संस्थापन पक्षको चर्को रोकावटका बाबजुद नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । ३८औँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा हिजो निर्वाचित भएका ओली देशको १८औँ ‘बाहुन प्रधानमन्त्री’ बनेका छन् ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि जनताका छोराछोरीले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाअनुसार ओली ‘जैसी/कुमाई बाहुन’को तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिलालगायतको उत्पीडित समुदायको आन्दोलन र आन्दोलनकारीप्रति अति नै रुखो वचन प्रहार गर्ने ओली तिनै समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदको समेत भोट पाएर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म बाहुन–क्षेत्रीबाहेक एक जना नेवार र एक दशनामीले मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने अबसर पाएका छन् ।
२००७ सालदेखिको तथ्याङ्कले एउटा रमाइलो पक्ष के देखाउँछ भने २०४६ सालदेखि यता करिब करिब बाहुनबाहेक अन्य समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् । राजतन्त्र सक्रिय हुँदा भने प्रधानमन्त्रीमा क्षत्रीको प्रभुत्व देखिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्योपदेश’मा बाहुनलाई दरबारमा पैठ नदिनू भन्ने अर्तिका कारण राजतन्त्रकालमा बाहुन जातिबाट प्रधानमन्त्री कम भएका हुन् ।
२०४६ सालपछिका २६ वर्षमा २० पटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । त्यसमा पञ्चायत कालमै प्रधानमन्त्री बनिसकेका सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द दुई/दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अपवादमा शेरबहादुर देउवा तीन पटक अर्थात् २६ पटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा ७ पटक क्षेत्री प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसबाहेक १९ पटक बाहुन प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
राजा सक्रिय रहेको पञ्चायती व्यवस्थामा १३ पटक र राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकाल (२०५९–२०६३) मा तीन पटक गरी १६ पटक राजाले प्रधानमन्त्री बनाउँदा बाहुन २ पटक मात्र प्रधानमन्त्री बनेको देखिन्छ । दुवै पटक प्रधानमन्त्री हुने भाग्यमानी बाहुन नगेन्द्रप्रसाद रिजाल हुन् । त्यसबाहेक सबै समय क्षेत्री प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पञ्चायतको अन्तिम समयमा मरिचमान सिंह (नेवार) र मध्यकालमा तुलसी गिरी (दशनामी)ले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य भने सूर्यबहादुर थापा (५) र लोकन्द्रबहादुर चन्द (४)ले पाएका छन् । यी दुवै क्षेत्री हुन् । २००७ सालदेखि यता जम्मा ६ जना क्षेत्रीहरु प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने १८ जना बाहुन तथा नेवार र दशनामी एक÷एक पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । राजतन्त्रका लागि क्षेत्री नै पहिलो रोजाइ बनेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्याख्याअनुसार तराईको हुलाकी सडकभरि लाखौं जनसमुदाय उतारेर ‘माखेसाङ्लो’ बनाउने मधेशी समुदायबाट अहिलेसम्म एक जना पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् । यता आन्दोलनको नाममा ‘माकाफुइँ’ (बाँदरे फूर्ति देखाउने) ‘तिघ्रे’ जनजातिबाट २०४६ सालदेखि यता प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत कोही देखिएका छैनन् ।
भैरव रिसाल/राममणि रिसाल (२०६१), नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु (२००७ सालदेखि २०६१ साल जेठसम्म मन्त्री भएका व्यक्तिहरुको नामावली) । ईसमता डटकमबाट
Previous : आजदेखि दुर्गा पूजा शुभारम्भः पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा गरिँदै
Next : अमेरिकाद्वारा सिरियाली विद्रोहीलाई गोली-बारुद